Mpanohana - Eszótár
Misaotra an'ireo mpanohana antsika rehetra
Mpanohana ny balancer fampiroboroboana simika
Mitazona serivisy tsara ho an'ny mpampiasa anay. Tena ankasitrahanay ireo mpanohana anay izay mandray anjara betsaka amin'ny fitohizanay
Misaotra amin'ny maha mpanohana anay
Tongasoa eto amin'ny pejin'ny rakibolana an-tserasera. Misaotra betsaka anao mitsidika. Tianay ny milaza aminao fohy ny momba ny tombony azo amin'ny diksionera hongariana-anglisy sy anglisy-hongroà amin'ny Diksionera:
- Ny diksionera dia tsy mampiseho afa-tsy ny fandikan-teny marina indrindra, noho izany dia tsy mila misafidy amin'ireo teny mitovy hevitra atolotra ianao.
- Ny diksionera dia tsy ny teny fikarohana ihany no aseho, fa koa ireo teny izay miafina ny teny hoe "miafina". Amin'izany dia tsy mila manoratra fehezanteny lava ianao, manamboatra ny diksionera ho an'ny fianarana fiteny sy fampiharana.
- Ny rakibolana anglisy-hongroà dia misy fanafohezana Anglo-Saxon zato mahery. Ohatra: NASA
- Ny diksionera anglisy-hongroà dia mamadika ho azy ny Amerikanisma ho namany mitovy aminy anglisy. Ohatra: lasantsy
- Raha mbola tsy ao anaty rakibolana ny teny tadiavinao dia hosoloinay ao anatin'ny 24 ora.